Webpage တွေမှာ Link ထည့်နည်း.........
Myanmar IT Resource Forum » WEB DEVELOPERS ZONE » » Other Web Developing Technology » Webpage တွေမှာ Link ထည့်နည်း.........
1 Webpage တွေမှာ Link ထည့်နည်း......... on 19th May 2009, 2:53 pm
Webpage တွေများ Link ထည့်နည်း
မိမိရဲ့ Webpage တွေမှာ Link တွေ ထည့်ချင်တယ်ဆိုရင်
Tag တွေကို အသုံးပြုပါတယ်။ အဲဒီ Tag တွေက တစ်ခုနှင့်တစ်ခု ချိတ်ဆက်ပေးပါတယ်။ Tag နှင့် href ( Hypertext Reference ) ရဲ့နောက်မှာ မိမိချိတ်ဆက်ချင်တဲ့ ( ညွန်းချင်တဲ့ ) URL Address ကို ရေးသားရပါမယ်။ ဥပမာ -
အပေါ်က ကုဒ်ကို Browser ကနေ ကြည့်ရင် ဒီလို မြင်ရလိမ့်မယ်။
* [You must be registered and logged in to see this link.] က မိမိသွားချင်တဲ့ URL Address ပါ။
* Google ဆိုတာက မြင်ရမယ့် အမည်ပါ။ ( မိမိနှစ်သက်ရာကို ပေးနိုင်ပါတယ် )
Webpage တွေမှာ URL Link တွေကို ပုံလေးတွေ အစားသွင်းပြီး ညွန်းခြင်း
ဒါကလဲ သိပ်ပြီးထွေထွေ ထူးထူးမရှိပါဘူး။ အပေါ်ကနဲ့ ရေးပုံရေးနည်းက အတူတူပါပဲ။ ပုံလေးထည့်လိုက်တာပဲ ရှိပါတယ်။ ပုံကို ထည့်တဲ့ နေရာမှာ HTML Form အတိုင်းထည့်လိုက်ရင် ရပါပြီ။ ကျွန်တော် အောက်မှာ နမူနာ ရေးပြထားတဲ့ ဥပမာ လေးကို ကြည့်လိုက်ပါ။ ဒါဆို နားလည်သွားပါလိမ့်မယ်။
Last edited by ET on 20th May 2009, 10:10 am; edited2times in total
2 Re: Webpage တွေမှာ Link ထည့်နည်း......... on 19th May 2009, 9:01 pm
ကျွန်တော်ကိုဖြစ်နိုင်ရင် internal link ထည့်နည်းကိုပါရှင်းစေလိုပါတယ်ခင်ဗျာ
3 Re: Webpage တွေမှာ Link ထည့်နည်း......... on 19th May 2009, 9:16 pm
A link is called an anchor in HTML, and so the tag to represent it is the
tag. When you use an anchor, you must point to the Web page address that
you want to go to when you click. You specify this with the href attribute.
You can link either images or text
Make sure to check your links so that they don't go bad
Internal links are links to another part of the same page. If you clicked on the
"Internal Links" link at the top of this page, you would have clicked an internal
link (sometimes confusingly calledabookmark).
There are two parts of an internal link:
the named portion of the page
To nameaportion ofapage, surround some text (or an image or other object)
tags. And give that anchoraname. For example:
<a name="internal">Internal Links</a>
While you don't have to
surround anything with the
tags, it isagood idea. Some browsers
can get confused if they think they have to link to "nothing". Also, keep your
name anchors out of tables, if possible. This also can confuse browsers.
Once you have namedaportion of your page, link to it usingastandard
tag. Only, in the href portion, point to the name with a
at the front. For example:
<a href="#internal">go to internal links</a>
This would link toasection of your page labeled:
4 Re: Webpage တွေမှာ Link ထည့်နည်း......... on 24th May 2009, 9:27 am
မှတျပုံတငျသောနေ့ : 2009-05-23
ဓါတ်ပုံထည့်ပြီး အဲ့ဒိါကို link ချိတ်ထားတယ်ဗျာ..အဲ့ဒီ ဓါတ်ပုံဘေးမှာ အရောင်တွေပေါ်နေတယ်..အဲဒါကိုမပေါ်စေချင်ဘူး..ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ..ဖြေပေးကြပါဦးနော်။
5 Re: Webpage တွေမှာ Link ထည့်နည်း......... on 24th May 2009, 11:11 am
အစ်ကိုက html နဲ့ချိတ်တာဆိုရင်တော့ Border မဖျောက်ထားလို့ပါ....
<img src="example.jpg" border=0>
6 Re: Webpage တွေမှာ Link ထည့်နည်း......... on 24th May 2009, 12:31 pm
image အပေါ်မှာ mouse တင်လိုက်ရင် စာလေးပေါ်လာအောင်ရော.. ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဟင်
7 Re: Webpage တွေမှာ Link ထည့်နည်း......... on 24th May 2009, 12:34 pm
သြော်အဲ့ဒါကတော့ alt ကိုသုံးရတာပါ....
<img src="example.jpg" border=0 alt="Hello">
အဲ့ဒါဆိုရင် အစ်ကိုပြောသလို မျိုးပါပဲ... Hello ဆိုတဲ့စာလေးပေါ်နေပါလိမ့်မယ်...
8 Re: Webpage တွေမှာ Link ထည့်နည်း......... on 24th May 2009, 12:35 pm
9 Re: Webpage တွေမှာ Link ထည့်နည်း......... on 19th August 2009, 6:44 pm
ကိုယ် က link တစ်ခု ကို တင်ထားမယ် ဒါပေမယ့် အဲဒီ့ link ကို ကိုယ် ရဲ့ page မှာမကြည့်စေချင်ဘူး နောက် tab တစ်ခု မှာ ကြည့်ရအောင်ကတော့ ..
<a href=" your url name" target="blank"> your url name</a>
10 Re: Webpage တွေမှာ Link ထည့်နည်း......... on 15th January 2010, 10:17 am
ကျွန်တော်လည်း free ဆိုက်လေး တစ်ခုလုပ်ချင်တယ်ဗျာ
ဘာမှ မသိတော့ ဘာမှ မလုပ်တတ်ဘူးဖြစ်နေတယ်
web နဲ့ပတ်သတ်လို့ ဘာဆို ဘာမှ မသိတာ
11 Re: Webpage တွေမှာ Link ထည့်နည်း......... on 15th January 2010, 12:59 pm
ကျနေ်ာက ကြားကနေ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ မသိတဲ့လူတွေအတွက် တော့ အရမ်းအကျိုးရှိပါတယ်ဗျာ
12 Re: Webpage တွေမှာ Link ထည့်နည်း......... on 15th January 2010, 5:57 pm
Ning ထက်စာရင် Blog က ပိုကောင်းတာပေါ့။ (ဒါပေမယ့် ဘန်းထားလေတော့ )
13 Re: Webpage တွေမှာ Link ထည့်နည်း......... on 15th January 2010, 7:29 pm
I think it is most suitable.
14 Re: Webpage တွေမှာ Link ထည့်နည်း......... on 19th January 2010, 5:36 pm
ဟုတ်ကဲ့ဗျာ သင်ပေးချင်တာနဲ့သာ သင်ပေးပါ
15 Re: Webpage တွေမှာ Link ထည့်နည်း......... on 19th January 2010, 7:09 pm
٨††∂¢қєř wrote: ဒါပေမယ့် Blog က Features တွေက ရိုးရိုးကြီးလေကွယ်။ နောက်ပြီးသူ့ရဲ့ template ကိုကြတော့ ရော ၊ ပုံတုန်းကြီးနဲ့ထားမှာလား ။
စပြီးလေ့လာတဲ့သူတွေက အဲလိုတွေမကြိုက်ဘူးဟ ။ ဒီတော့ အဆင်လည်းပြေ ၊ လွယ်လည်းလွယ် ၊ ကလိလို့ကောင်းတဲ့ ning နဲ့ပိုပြီး အံဝင်မလားလို့ပါ
16 Re: Webpage တွေမှာ Link ထည့်နည်း......... on 19th January 2010, 7:21 pm
Wordpress ဆိုရင်ကောလို့? အဲဒါကျ ထောက်ခံဘူးလား။
17 Re: Webpage တွေမှာ Link ထည့်နည်း......... on 22nd January 2010, 9:46 am
<IMG SRC="C:\_Documents and Settings\_User\_My Documents\_VIP\_wunna vip file\_photo\_21years.jpg">21years</body>
this is show of my setting
C:\_Documents and Settings\_USER\_My Documents\_VIP\_wunna VIP file\_photo
18 Re: Webpage တွေမှာ Link ထည့်နည်း......... on 22nd January 2010, 9:48 am
19 Re: Webpage တွေမှာ Link ထည့်နည်း......... on 22nd January 2010, 10:07 am
စက်ထဲမှာပဲ note pad လေးနဲ့ရေးကြည့်နေတာဗျာသိလား
အဲ့ဒါ ပုံက ကြက်ခြေခတ်ပဲပေါါ်လို့သိလား ဘယ်လိုပြန်ေ၇းရမလဲမသိဘူး လမ်းညွန်ပေးပါလား
20 Re: Webpage တွေမှာ Link ထည့်နည်း......... on 22nd January 2010, 10:08 am
ကို Connection ရေ
21 Re: Webpage တွေမှာ Link ထည့်နည်း......... on 22nd January 2010, 10:23 am
အိမ်မှာလေ .html နဲ့မှတ်ပြီးေ၇းတာလေ notepad နဲ့ေ၇းတာလေဗျာ
အဲ့ဒါေ၇းတားပေါ်မလာ လို့ပတ်လမ်းမှားနေတယ်ထင်တယ်သိလား အဲ့ဒါလေးပြောပြပးပါလားဗျာ
ိသိချင်တယ်ဗျာ စာအုပ်တွေလည်းလျောက်ဖတ်တာကုန်နေပြီမ၇ဘူးဖြစ်နေတယ်ဗျာ န်ညးနာ်းလောက်ပြောပြပေးပါလားဗျာ
22 Re: Webpage တွေမှာ Link ထည့်နည်း......... on 22nd January 2010, 3:34 pm
you need to check your photo extension. .jpeg or .jpg...
<img src="C:\_Documents and Settings\_USER\_My Documents\_VIP\_wunna VIP file\_photo.jpg">
<img src="C:\_Documents and Settings\_USER\_My Documents\_VIP\_wunna VIP file\_photo.jpeg">
<img src="C:\_Documents and Settings\_USER\_My Documents\_VIP\_wunna VIP file\_photo.gif">
23 Re: Webpage တွေမှာ Link ထည့်နည်း......... on 22nd January 2010, 3:50 pm
24 Re: Webpage တွေမှာ Link ထည့်နည်း......... on 22nd January 2010, 3:54 pm
jpg နဲ့ jpeg ကိုတူတူပဲထင်နေတာ
ဒါကြောင်း extension မှားနေတာဖြစ်မယ် အကိုသိလားဗျာ
25 Re: Webpage တွေမှာ Link ထည့်နည်း......... on 22nd January 2010, 3:56 pm
ကျွန်တော်ပုံက jpeg extension မှားနေတာ ဒါကြောင့်ပုံမပေါ်လာတာဗျာသိလား
26 Re: Webpage တွေမှာ Link ထည့်နည်း......... on 22nd January 2010, 4:05 pm
Folder option ကနေ hide extensions ကိုဖြုတ်ပြီးတော့ ext: ကိုသေချာထည့်ပေးရင်ရပါတယ်အစ်ကို...
Notepad နဲ့မစမ်းချင်တော့ရင် Frontpage , Dreamwaver လိုမျိုးတွေ သုံးပြီးစမ်းပေါ့....ပိုလွယ်တယ်
27 Re: Webpage တွေမှာ Link ထည့်နည်း......... on 22nd January 2010, 4:11 pm
hide extension ကိုဘယ်လိုဖြုတ်ရတာလဲ
မသိဘူးဗျာ dream waver လည်းနားမလည်ဘူး
ဗျာ ပို့မယ်မို့ ကတို့ထိပို့လိုက်ပါတော့ဗျာ အားတော့နာပါတယ်ဗျာနော်
28 Re: Webpage တွေမှာ Link ထည့်နည်း......... on 22nd January 2010, 4:19 pm
Folder Option>View>Hide extensions for known file types ကိုအမှန်ခြစ်ဖြုတ်လိုက်ပါ... ဒါဆိုရင် file extensions တွေမြင်ရပါလိမ့်မယ်....ဒါဆိုရင် အစ်ကို့ HTML page မှာ link ချိတ်ဖို့လွယ်သွားပါလိမ့်မယ်...
29 Re: Webpage တွေမှာ Link ထည့်နည်း......... on 22nd January 2010, 8:44 pm
30 Re: Webpage တွေမှာ Link ထည့်နည်း......... on 21st February 2010, 9:42 pm
ညီလေး ကွန်နက်ရှင်ရေ ညီလေးပုံကြက်ခြေခတ်ဖြစ်ရတဲ့ အကြောင်းရင်းက image hosting မှာသွားမတင်လို့ကြက်ခြေခတ်ပေါ်တာပါ ကိုယ်ပေါ်ချင်တဲ့(ဥပမာ)ညီလေးခုတင်ထားတဲ့စီထဲကပုံပေါ့ အဲပုံကို image hosting တခုခုမှာ
တင်လိုက် ဒါရိုက်လင့်စ်လေးကော်ပီကူးပြီး <IMG SRC="ဒါရိုက်လင့်လေးထဲ့ပေးပါ">21years</body>
ဒါဆိုပေါ်ပြီးပေါ့ image hosting မသိရင် လင့်ပေးလိုက်မယ် အဲဒီမှာသွားတင်နော်ညီလေး
Last edited by N@Y Y!N3 on 22nd February 2010, 12:20 pm; edited 1 time in total (Reason for editing : code)
31 Re: Webpage တွေမှာ Link ထည့်နည်း......... on 15th March 2010, 8:48 pm
ကျွန်တော် နားမလည်း ပါဘူး ဗျို. ကျွန်တော် စိတ်ညစ်နေပြီဘယ်လို လုပ်ရမလဲ ကျွန်တော် ဆိုက်လေးလုပ်တတ်ချင်တယ်ဗျာ ကျွန်တော် ဆိုက်လေး ကို အကို တို. siteလေးတွေဖော်ပြချင်တယ်ပြီးတော. လည်း အလှဆင်ချင်တယ် ပြီးတော. ကောင်းကောင်း ကြီးmanagement လုပ်တတ်ချင်တယ်ဗျာ ဘယ်လို လုပ်ရမလဲ ဖြစ်ပါ.မလား မသိဘူး မြင်.လိုက်တာဗျာ[You must be registered and logged in to see this image.]
32 Re: Webpage တွေမှာ Link ထည့်နည်း......... on 16th March 2010, 5:25 am
note pad နဲ့ကိုယ့်စက်ထဲမှာ ကိုယ့် ဘာသာရေးပြီး ပုံမပေါ်တာ browser နဲ့ဆိုင်တယ်ထင်တယ်.....IE နဲ့ မပေါ်ရင်
Mozilla နဲ့သုံး၊ mozilla နဲ့မပေါ်ရင် IE နဲ့သုံးပေါ့.....ကိုယ်စက်ထဲမှာရေးကျင့်တာက IEမှာပဲ ပေါ်တာများတယ်ဗျ.....ကျွန်
တော်တော့် ဒါပဲသိတာ.... ကုဒ်နဲ့ဆိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ သိတဲ့လူတွေ ဆက်ရှင်းပါဦးဗျ..............
33 Re: Webpage တွေမှာ Link ထည့်နည်း.........